उचाई नबढेर तनावमा हुनुहुन्छ ? आजै अपनाउनुस् यस्तो घरेलु उपाय ! Yes Khabar | Nepali News from Nepal | Recent News
उचाई नबढेर तनावमा हुनुहुन्छ ? आजै अपनाउनुस् यस्तो घरेलु उपाय !
कुनै पनि मानिसको पर्सनालिटी राम्रो देखाउनको लागि हाईट अर्थात् उचाईको महत्वपूर्ण हात रहन्छ। तर कसैको बच्चादेखि नै हाईट राम्रो हुन्छ त कसैको हाइट सानो हुनुले धेरै कुरामा समस्या परिरहेको हुन्छ।
जस्तै आफु भन्दा कम उमेरकाले व्यक्तिले भाई भन्ने ठूलो या आफ्नो उमेरको साथीभाईहरु सँग बस्दा सानो कदले गर्दा बच्चा देखिएको महसुस गर्दै हिनताबोध हुने गर्छ। उचाई सानो हुनु बिशेषगरी जेनेटिक (वंशाणुगत) समस्या हो।
यति तपाईको घरमा कुनै सदस्यको उचाई सानो छ भने तपाईको पनि उचाइ सानो हुने सम्भावना हुन्छ। तर कुनै अवस्थामा पौष्टिक तत्वको संयोजन नमिल्दा पनि उचाई कम हुन सक्छ।
हाईटको कारण कैयौं पटक हामी मजाकको पत्र पनि बन्ने गर्छन्। कति सम्म हुन्छ भने सानो उचाई भएकै कारण विबाह समेत गर्न समस्या पर्ने गर्छ। यसबाहेक कुनै करियर आप्शन यस्ता हुने गर्छन् जहाँ लामो उचाई भएका मनिसहरु मात्र प्राथमिकता दिईन्छ। उदाहरणका लागि सैनिक, प्रहरीमा भर्ना, सुरक्षा गर्दा, अंगरक्षक आदि।
त्यसैले आज आज तपाइँलाई हाईट बढाउने सरल घरेलु उपाए बताउन गैरहेका छौं। यदि तपाईले तल दिईएको उपायहरुलाई सहि तरिकाले प्रायो गर्नुभयो भने तपाईको हाईट अवस्य बढ्नेछ।
हरेक बिहान दिन दुधमा गुण मिसाएर सेवन गर्नुहोस। ध्यान राख्नुस्, दूध मनतातो हुनुपर्छ र गाईको हुनुपर्छ। भैसी र बाख्राको दुध प्रयोग नगर्नुहोला। गाईको दुधमा क्याल्सियमको मात्र धेरै हुन्छ। त्यसबाहेक यसमा प्रोटिन पनि अत्यधिक मात्रामा हुन्छ। हाइट बढाउन क्याल्सियमको महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ।
यो (दुध र गुणको घोल) सेवन गर्दा हरेक दिन बिहान खालीपेट सेवन गर्नुपर्छ। खासगरी गुणमा ग्लूकोजको मात्रा अधिक हुन्छ, जसले हड्डीहरुलाई बढाउन सहयोग गर्छ। साथै दुधमा जस्तै यसमा पनि क्याल्सियम पनि पाईन्छ। अईरन र कपर पनि शरीर बढाउने ग्रन्थीको लागि आवस्यक पर्छ जुन गुणमा भरपुर मात्रामा पाइन्छ।
तर कुनै मानिसहरुलाई गुण खानाले गर्मी हुन्छ। यदि तपाईमा पनि यस्तो समस्या छ भने बिहान गण मिसाएको दुध खाइसकेपछी दिउसो एक कचौरा दहि खान सक्नुहुन्छ। यस्तो गर्नाले शरीरमा गर्मीको समस्या हुँदैन।
समरण रहोस, हाईट बढाउने यो तरिकारउपाए ३५ वर्षसम्मका व्यक्तिहरुले अपनाउन सकिन्छ। किनकी, यो उमेरअवधि पछी हाईट बढाउन सम्भव छैन।